Imidlalo Ye-Android Edumile - I-Apk Yokulanda
Imidlalo Ethandwa Yama-Apk
Version: 5.1.1 APK - Updated: October 20, 2020
"Yu-Gi-Oh!" iyatholakala ekuhambeni njengohlelo lokusebenza leselula! Ngabe unayo ukuthi yini edingekayo ukuze ube yi-King of Games?Kulula ukufunda imithetho nezilawuli ezilula zabaqalayo! I-gameplay eyangenayo futhi ezuzayo ye- "Yu-Gi-Oh!" Veterans!Players Abadlali bakaDuel...
Hlanganisa imidlwane yakho ukuze uthole imali futhi wakhe idolobhana lakho.Wake wafuna ukuba ngumdlwana wakho? Nazi zonke izinhlobo zezinja ezinhle. Ungaxhuma ukuhlanganisa nokuthola okungcono kakhulu. Woza uwaqoqe wonke ~Thola iLabrador Retriever, iFrance Bulldog, Umelusi waseJalimane, iGolden...
Ngena ku-PEPI HOSPITAL futhi ube ngudokotela, ubekezele noma umane nje ungumhloli wamasu wokufuna ukwazi! Ukungezwa kwethu okusha emndenini ocebile wemidlalo ye-PEPI PLAY kunikeza isikhungo esikhulu sezokwelapha ngamathani wezinto, imisebenzi, nezindlela zokudlala. Joyina abalingiswa bethu...
Version: 1.6.5 APK - Updated: October 23, 2020
Landa imidlalo engcono kakhulu yegama elithi MAHHALA ku-WORD QHUBA!Ukuqoqa iZwi kunemidlalo yegama elijabulisayo yama-Word Nerds! IZwi Ukuqoqa liqala njengemdlalo wezwi elilula futhi liba nzima njengoba uphakamisa!Jabula i-GAMEPLAY IWORD!- Xhuma izinhlamvu kunoma iyiphi indlela ukuze uhlanganise...
I-Ninja's Creed iyinhlangano yamahhala yokubulala i-3D real sniper yokubulala ngezinhlobo ezahlukene zezikhali zokubulala. Uzozizwa unamandla wokudubula onamandla kanye nemidwebo ephezulu ephezulu ye-3d. Udinga ukufihla ubuwena, ususe ngasese amaqembu ezigebengu, uphazamise amadili angaphansi...